स्रोत नखोजी बाँड्ने कुरा मात्र गर्छन् कम्युनिष्ट, अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाको अन्तर्बार्ता
प्रकाशित मिति: Nov 27, 2017 9:47 AM
स्रोत नभइकन कांग्रेसको सरकार हुँदा जबरजस्ती कार्यक्रम हालेको चाहिँ छैन। स्रोत छ भने त गर्दा भइहाल्यो नि। कम्युनिष्टहरुले चाहिँ स्रोत बिना पनि कार्यक्रम हालिदिने र बजेट व्यवस्थापनमै दूरगामी असर पर्ने अवस्थालाई पनि मतलव नगरेको देखिन्छ।
हामीले सुरुमा मोवाइलको सिमकार्ड लिन लाइन बस्नु पर्थ्यो। जब एनसेल आयो नेपाल टेलिकमले ठाउँ ठाउँमा स्टल राखेर सिमकार्ड बिक्री गर्न थाल्यो। त्यसैले उदारीकरणको बिरोध त बिशुद्ध राजनीति मात्र हो। बिशेषगरि कम्युनिष्टहरु सरकारमा आउँदा आफ्नो 'आइडिया ए, सेल गर्न आइडिया बी' लाई गाली गर्छन्। सामाजिक भत्ताहरु बढाउन उदारीकरणले देश बिगार्यो, जनतामा आउने पैसा मिलाएर खाइदिए जस्ता भाषण गर्छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कर बढाउनु पर्छ भन्ने तर्क उनीहरुको हुने गर्छ। तर, साँच्चिकै कर बढाउन पनि सक्दैनन्।
जुन अधिकृतहरुले १९९२ मा निजीकरणको टिप्पणी उठाउँथे अहिले उनीहरुनै सचिव, सह-सचिव भएर मन्त्रालयहरुमा काम गरिरहेका छन्। निजीकरणमा पनि उनीहरुनै, माओबादी द्वन्द्वताका बजेट योजनामा पनि उनीहरु नै र अहिले पनि उनीहरु नै। के नयाँ भयो र? त्यसैले हाम्रो मूल समस्या भनेकै व्यवस्थापन हो।
स्रोत नखोजी बाँड्ने कुरा मात्र गर्छन् कम्युनिष्ट, अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाको अन्तर्बार्ता को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
B. Luitel[ 2017-11-27 03:22:26 ]
कांग्रेसको सल्लाहकार राख्ने मान्छेलाई प्रश्न सोधेर पनि हुन्छ? वकवास
हालसम्म ३२३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।